ओली गुटमै टकराव आउँदा एमाले महाधिवेशन निर्वाचनतर्फ! बन्ला त नेम्बाङ-पौडेल समीकरण?
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरुमा नेतृत्व चयनबारे बेमेल देखिएको छ। पदाधिकारीका लागि ओली समूहका नेताहरु गुटगत रुपमा लबिङ गर्न थालेका छन्। यसले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि ओली समूहकै नेताहरुबिच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ। स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने…
चितवन– चितवनको सौराहामा जारी एमालेको १०औं महाधिवेशन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नवनिर्वाचित उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले घोषणापत्र समितिका तर्फवाट तयार भएको घोषणापत्र बाचन गरेर सुनाएका थिए । सो प्रस्तावलाई महाधिवेशन हलले ध्वनि मतले पारित गरेको छ । १० मंसिरबाट सुरु भएको एमाले महाधिवेशन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने नाममा दुई दिन लम्बियो […]
एमाले महाधिवेशन : यस्तो छ उम्मेद्वारको मनोनयनपत्र
सौराह : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दिनभरको प्रयासको बावजुद् नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष डा भीम रावलले सहमतिका नाममा आफू अध्यक्षको उम्मेद्वारीबाट पछि नहट्ने अडान राखेपछि एमाले महाधिवेशन निर्वाचन समितिका संयोजक डा विजय सुब्बाले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन्।…
एमाले महाधिवेशन : सहमति नभएपछि जारी भयो निर्वाचन कार्यतालिका, भोलि मतदान
एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा पुगेर महन्थले भने, 'ओलीप्रति अनुग्रहित छु'
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरूप्रति सद्भाव देखाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिएका छन् । एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई चितवनमा सम्बोधन गर्दै ठाकुरले आफू ओलीप्रति अनुग्रहित रहेको बताएका हुन् । ‘म यहाँ धन्यवाद दिन आएको छु । पार्टीप्रति, नेता र कार्यकर्ताप्रति जुन सद्भाव देखाउनुभएको छ, त्यसप्रति अनुग्रहित छु,’ ठाकुरले भने । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा मुद्दा फिर्ता लिइदिँदा आफ्ना १ सय ३९ साथी रिहा भएको उनको भनाइ थियो । उनले आफूहरूका बाँकी माग सम्बोधन गर्न वर्त...
एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोह [LIVE]
नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा शुरू भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नारायणी नदी किनारमा भइरहेको छ । समारोहमा सहभागी हुन देशभरबाट एमाले नेता/कार्यकर्ता चितवन पुगेका छन् । एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि चितवन पुगेका छन् । हेर्नुस्, एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोह :
एमाले महाधिवेशन एकै पटक ७२ जना कलाकारले नाच्न मिल्ने गरी बनाइँदै छ मञ्च
काठमाडौं, २ मंसिर : नेकपा एमाले महाधिवेशन आउँदो १० मंसिरबाट चितवनमा सुरु हुँदै छ । महाधिवेशनस्थलको नक्सांकन गरिएको एमाले केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार १०० अतिथि रहने गरी आकर्षकमञ्च निर्माण गरिनेछ । एकै पटक ७२ जना कलाकारले प्रस्तुति दिन मिल्ने गरी मञ्च बनाइने उनले जानकारी दिए । चार खण्डमा हुने मञ्चको […]
एमाले महाधिवेशन स्थलमा प्रतिनिधि हुन तछाड मछाड
चितवन– नेकपा (एमाले)को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन १०–१२ मंसिरसम्म चितवनमा हुँदैछ । त्यसका लागि एमालेले आज देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दैछ । चितवनबाट महाधिवेशनमा २८ जना प्रतिनिधि जानुपर्नेमा सात गुणा बढीको मनोनयन पत्र दर्ता भएको छ । एमाले महाधिवेशन स्थलमै प्रतिनिधि हुन तछाड मछाम देखिएको छ । २८ जना प्रतिनिधिको लागि २०६ जनाको मनोनयन पत्र दर्ता […]
बागमतीको तीन जिल्लामा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन
२६ कात्तिक, काठमाडौं । बागमती प्रदेशको तीन जिल्लामा नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसहमत चयन भएको छ । १०औं महाधिवेशनका लागि शनिबार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदैछ । तर दोलखा, मकवानपुर र रसुवामा शुक्रबार नै प्रतिनिधि चयन भएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार, दोलखाबाट २३, मकवानपुरबाट १७ र रसुवाबाट ४ जना प्रतिनिधि सर्वसहमत […]
एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकमा देखिएका दृश्य
नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रम निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको थियो । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरु उपस्थित थिए । कोरोना कहर
Artha Dabali चैत्र २०७७
बालुवाटारमा शुरू भयो एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक
नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरू भएको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल-माधव नेपाल पक्ष भने उपस्थित छैन । पार्टीको संसदीय दलले खनाल-नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको अवस्थामा आजको बैठकलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन र प्रतिवादसहित सांसदहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सांसदहरूलाई कारवाही हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रशपछि प्रधानमन्त्री ओली खनाल-नेपाल पक्षलाई अनुशासनको कारवाह...